Ithegi: mdgadvertising | Martech Zone
UBrian Wallace wabelana ngeMbali, i-Evolution, kunye neKamva leNtengiso ye-Influencer eyenze umsebenzi omangalisayo wokuchaza ifuthe kunye nokuba iimveliso zisebenzisana njani nazo. Ndithethile kakhulu malunga nendlela ii-brand ezisebenza ngayo nabashukumisayo kwaye ngokuchaseneyo kwaye ndiyakholelwa ukuba le infographic evela kwiNtengiso ye-MDG yenza umsebenzi obalaseleyo ekuboniseni ukuba ubudlelwane bempembelelo yempembelelo bujongeka kanjani. I-infographic, Imeko yeNtengiso ye-Influencer: Yeyiphi na into ekufuneka eyiNtengiso,
NgoLwesibini, Septemba 10, 2013 NgoLwesibini, Septemba 10, 2013 Douglas Karr
Ndicinga ukuba iNtengiso ye-MDG izama ukwenza abanye bethu baphose i-gasket xa sifunda isihloko sale vidiyo ye-infographic abayidibanisileyo, uLuntu ngokuKhangela ukuKhangela eSmackdown: Idabi leNtengiso ye-Intanethi. Kodwa, yeha, babuyela ezingqondweni zabo ngokuphela kwevidiyo. Ukuqala kwethu iarhente, ishishini laligcwele ziiarhente ezikhethekileyo. Ngapha koko, isiluleko sokuqala endisifumene kumnini wearhente yayingu
Zibandakanye! Imigaqo yeShishini kunye neMidiya yokuNxibelelana
NgoMvulo, Juni 7, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kulenyanga iphelileyo, bendifunda isiQinisekiso: Isikhokelo esigqibeleleyo seMveliso kunye noShishino ukwakha, ukuPhuhlisa, kunye nokulinganisa iMpumelelo kwiWebhu eNtsha. Oku ayikokufundwa ngokukhanya - isikhokelo esipheleleyo sinokuba yinto ephantsi! Yincwadi oyifunayo ukuba uhlale phantsi, ugxile kuyo kwaye wetyise iphepha elinye ngexesha. UBrian uzenzele into engeyiyo ngale ncwadi- ibanzi kwaye inokugubungela zonke izinto zokwenza uphawu,